Ogaden News Agency (ONA) – Qaramada Midoobay oo Digniin Udiray Shaqaalaheeda Itoobiya.
Qaramada Midoobay oo Digniin Udiray Shaqaalaheeda Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ December 30, 2017
Wararka naga soo gaadhaya wadanka gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in xafiiska Qaramada Midoobay (QM) ee magaalada Addis Ababa uu soosaaray digniin culus oo uu usoo diray shaqaalihiisa kusugan wadanka Itoobiya.
Digniintan kasoo baxday xafiiska Qaramada Midoobay (QM) ee wadanka Itoobiya ayaa kamid noqonaysa digniino isdaba joog ah oo ay Hay’ada Qaramada Midoobay kasoo saaraysay wadanka qasan ee Itoobiya, waxayna hay’adu dhowr jeer oo hore digniin usoo dirtay shaqaalaheeda kusugan Itoobiya.
Digniinta xafiiska Qaramada Midoobay (QM) ee Addis Ababa ayaa kusoo aaday xili ay kacdoon wadayaasha kasoo horjeeda taliska wayaanuhu jareen dhamaan wadooyinka waawayn ee magaalada Addis Ababa soogala ama kabaxa. Waxaana lasheegayaa in shaqaalaha Qaramada Midoobay uu go’doon kuyahay meelaha ay kusugan yihiin.
Sidoo kale kacdoon wadayaasha ayaa lasheegayaa in ay maalin nimadii shalay burburiyeen 4 baabuur oo Basas ah kuwaas oo kabaxay magaalada Addis Ababa kuna sii jeeday magaalada Asmatafari oo ay kasocotay xaflad diimeedka looyaqaano Qulubi Gebreal. Waxaana lasheegayaa in ay baabuurta lajajabiyay lahayd shirkada Salam Bus oo Gobolka Tigrey kadiiwaan gashan.
Hay’adaha Qaramada Midoobay (QM) ee wadanka Itoobiya ayaa wal wal kamuujinaya xaaladaha qalafsan ee ay kusugan yihiin dadwaynaha ree Itoobiya, waxaana lagu soo waramayaa in ay guud ahaan wadanka dib uga bilowdeen kacdoono cusub oo lagaga soo horjeedo taliska macangaga ah ee wayaanaha.
Dhinaca kale xukuumada wayaanaha ayaa ciidamo aad ubadan kusoo daabushay goobaha ay kacdoonada daran kajiraan, waxaana lashgayaa in ay ciidamadu si naxariis la’aan a ula dhaqmayaan kacdoon wadayaasha iyagoo rasaas nool u adeegsanaya dadka shacabka ah ee kacdoon wadayaasha ah.